“Cash point” : notafihan’ny jiolahy Nirefodrefotra ny basy, lehilahy iray naratra voatifitra | NewsMada
“Cash point” : notafihan’ny jiolahy Nirefodrefotra ny basy, lehilahy iray naratra voatifitra
Notafihan’ny andian-jiolahy nirongo basy, omaly antoandro, ny “Cash point”, toerana fivarotana fahana sy finday, teny Anosibe. Tapitra norobain’ireo jiolahy ny vola tao. Nanapoapoaka basy ry zalahy avy eo rehefa nitsoaka, ka tamin’izany no nahavoa ny lehilahy iray, naratra voatifitra teo amin’ny tratrany.
“Toy ireny amin’ny horonantsarimihetsika ireny ny zava-nitranga tety aminay. Nirefodrefotra ny basy. Nifanenjika ny polisy sy ny jiolahy”, hoy Ratojo, mpivarotra eny Anosibe, nahita ny fanafihan’ny jiolahy ny “Cash point” iray eny an-toerana, omaly antoandro tamin’ny 12 ora latsaka teo. Araka ny fitantaran’ity mpivarotra mifanila amin’ilay toerana voatafika ity, telo lahy no tazany nanao ny fanafihana. “Nijanona teo ivelany ny iray sady nanapoaka basy no nilaza fa mila vola ny Malagasy ary manantona izay sahy. Natahotra ny olona ka nitsoaka. Izaho, natory tamin’ny tany”, hoy hatrany Ratojo.
Voalaza fa nirefotra indroa ny basy tao anatin’ilay toerana notafihina. Voatifitra teo amin’ny tratrany ny rangahy iray ary iray hafa voarasan’ny antsy. Lasan’ireo olon-dratsy ny vola rehetra tao amin’ilay toerana niampy ireo finday misy kaontim-bola rehetra.
Mbola nanapoaka basy izy ireo nandritra ny fitsoahany. “Vetivety ihany koa, tonga ny polisin’ny Sag sy B.C ary UIR ary nanenjika ireo jiolahy. Nifampitifitra toy ireny amin’ny video ireny ry zareo, ary efa ho 10 ny poa-basy”, hoy ny fitantaran’ireo olona teny an-toerana.
Tsy nisy tratra ireo jiolahy, na iray aza, na teo aza ny fifanenjehana tamin’ireo polisy. Dify tany anaty tanàna ireo jiolahy na mbola amin’ny andro antoandrobenanahary aza.
Nihorohoro ny tanàna
Nilaza fa raiki-tahotra ireo olona teny amin’ny manodidina ny toerana voatafika nahita ity tranga ity. “Toy ireny mpitandro filaminana ireny ny mahita ireo jiolahy. Manangana basy manondro lanitra sady manapoaka basy kanefa antsoantsoiny mba hanatona azy izay sahy azy ireo”, hoy ihany ny fitantarana.
Efa kinga ireo jiolahy satria na ireo polisy efa za-draharaha aza tsy nahasambotra azy ireo. Eo ihany koa ny filazan’ny olona ny amin’ny mety ho fisian’ny firaisana tsikombakomba. Ny fisian’ny basy eny am-pelatan’ny jiolahy izay efa miparitaka be loatra. Misy ny efa sarona, kanefa mbola betsaka ireo miparitaka. Eo ihany koa ny fisian’ny mpitandro filaminana manao jiolahy, izay efa voaporofo matetika ny amin’izany. Mandry an-driran’antsy ny vahoaka.